Biography Andrei Makarevich - "umshayeli" "Isikhathi Machine"
Bambalwa abantu bazi ukuthi Andrei Makarevich, ogama biography ngeke sibuyekeze kulesi sihloko, hhayi kuphela umculi, kodwa futhi umbhali wezingoma izingoma. Andrei V futhi kahle lomdwebi umsebenzi, umbhali, abasakazi kanye umkhiqizi. Futhi kuthathwa ngokuthi ithalente ezingaphezu kweyodwa kufihliwe kule ndoda emangalisayo.
Biography umdwebi: Makarevich Andrey
Usuku lokuzalwa idwala edume umculi ugubha 11 Disemba. Wazalwa ngo-1953 eMoscow. Abazali bakhe - abomdabu of Belarus: unina - Nina Markovna - kwaba udokotela, uyise - Vadim G. - umklami. Kusukela ebuntwaneni Andrew asithandayo imisebenzi uVladimir Vysotsky, iqembu «The Beatles», Bulat Okudzhava, okuyinto ngokungangabazeki wadlala indima ethile ebhayisikobho choice yakhe ikusasa umsebenzi. Kakade lapho eseneminyaka engu-13 ayakha band yakhe yokuqala okuthiwa «I Izingane», futhi kwakukhona "Isikhathi Machine" ngo-1969.
Biography Andrei Makarevich: imfundo isipiliyoni lochwepheshe kuqala
Ngemva kokuphothula esikoleni esiphakeme umfana engena Institute Architectural eMoscow, kodwa ngokushesha ngaxoshwa. Le nguqulo esemthethweni ukuxoshwa kwakhe eyunivesithi kwakuzwakala nje "ngoba bengekho" futhi akazange ahlangane ngokoqobo. Empeleni, lokhu kwakubangelwa umculo rock umsebenzi Makarevich, okuyinto akayithandanga ngesikhathi namandla. Lo mlingisi esikhathini esizayo ke wathatha umsebenzi Design Institute ukuzijabulisa izindawo yaseshashalazini wezakhiwo futhi baqhubeka sokuqeqesha amakilasi kusihlwa YaseMoscow Institute Architectural. Esifanayo waqhubeka etadisha umculo wakhe "Isikhathi Machine."
Biography Andrei Makarevich: impumelelo lokuqala
Ngo-1980, iqembu "Isikhathi Machine" yazuza isimo esemthethweni ngokungena ngemvume isivumelwano "Rosconcert", waqala ukwenza ngokusemthethweni. Iningi amaculo afakwe ku arsenal of iqembu, eyabhalwa Makarevich. Futhi nombhali amazwi, umqambi, futhi umculi. Kwaphela isikhathi eside, "Isikhathi Machine" lwenziwa isitayela Bard parallel Andrey V athuthukile nemisebenzi solo - wakhuluma, ukukhulula ama-albhamu.
Ngaphandle kweqiniso lokuthi Makarevich kwaba umculi ophumelelayo, uye athuthukiswe futhi njenge-TV. Lonke izwe wabukela uhlelo nge iqhaza lakhe, njengokuthi "Smack," "uMacarena", "Underwater World of Andrey Makarevich," "Shade," "amawindi ezintathu", "imoto isikhathi sami esiningi." Ngo-2002, kakade kuhle ukhathele monotony, Andrew kudala "Creole Tango Orchestra". Ithimba lalinabashumayeli abaculi "Ikota", "Isikhathi Machine", iqembu "Fern". Izikhali zawo zomculo kwaba Akumangalisi ezihlukahlukene - futhi idlalwe idwala, jazz, rumba, futhi chanson, futhi jika ngisho blues.
Biography Andrei Makarevich: ama-movie
Le filimu kuqala lapho umlingisi inkanyezi, ngokuthi "umphefumulo." Wadedelwa ngo-1982. Esondweni wesibili ka ifilimu, okuyinto inkanyezi Makarevich, wabizwa ngokuthi "ukuqala phansi." Washiya e yokuqasha ngo-1986. Ngaphezu kwalokho, nalo iqhaza umculi zisusiwe "i-Rock and Fortune" (1989), "iculo Old mayelana main" (1996 no-1997). "Crossroads" (1998), "Still Waters" futhi "Umbukiso" (2000), " usuku lokhetho "futhi" Loser "(2007).
Andrei Makarevich Biography: ukuphila Siqu
Lo mculi lalimisa washada kathathu. Ngokokuqala ngqá Andrei V washada Elena Igor Fesunenko (waphila iminyaka engamashumi amathathu). Ngokwesibili - ukuze Alla Romanova, ngubani wamzalela indodana Vanya (babendawonye iminyaka emithathu). Ngemva imishado emibili Makarevich wahlala umshado civil ne casula Rozhdestvenskoy, ngubani wamzalela Anna indodakazi ngo-2000. Ngo-2003 washada okwesithathu Natale Golub. Ngo-1997, umculi wafunda bokuba khona indodakazi eneminyaka engu-19 ubudala engumlanjwana, ohlala e-United States.
Aron Raymon: imfundiso lwezenhlalo
Spanish footballer Morentes Fernando: Biography, izibalo, imigomo, futhi amaqiniso athakazelisayo